Shirka Maamul usameynta Gobalada Hiiraan Iyo Shabeelada dhexe Oo Qabanqaabadiisa kasoco Baldweyne – STAR FM SOMALIA
Shirka Maamul usameynta Gobalada Hiiraan Iyo Shabeelada dhexe Oo Qabanqaabadiisa kasoco Baldweyne
Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan C/fataax Xasan Afrax ayaa sheegay in todobaadka soo socda uu ka furmayo magaalada Beledweyne shirka maamul u sameynta Gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe,kaasoo ay ku howlan tahay dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
C/fataax Xasan Afrax ayaa maanta ka sheegay magaalada Beledweyn in shirka uu maalmaha soo socda furmayo, isagoo ugu baaqay shacabka reer Hiiraan inay u diyaar garoobaan soo dhoweynta ergada ka qeyb galeysa shirka iyo kuwa ka imaanaya Gobolka Shabeellaha Dhexe.
“Waxaa todobaadka soo socda ka furmaya Beledweyn shirka Maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, waa la socotaa Federaalka sameyntiisa inay socoto, waxaa ugu baaqayaa reer Hiiraan in martida idin imaaneysa soo dhoweysaan, guryaha ugu baxdaan”ayuu yiri C/fataax Xasan Afrax.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in arrimaha shirka maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ay ka soo socotay Addis Ababa illaa Muqdisho, ayna isaga iyo Madaxweynaha iska arkeen, waxaana uu tilmaamay in Madaxweynaha uu imaan doono Beledweyn.
Inkastoo aanay wali la shaacin goobta rasmiga ee lagu qabanayo shirka maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, hadana ma jiro war ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Gudaha oo ku aadan halka uu marayo howlaha maamul sameynta Labada Gobol ee ah kuwa kaliya ee ka haray dhismaha Maamul goboleedyada.
Sidoo kale dowladda Federaalka ayaa wali qaban shir ku saabsan arrimaha maamul u sameynta Gobolladan oo loo qabtay dhinacyada ka soo jeeda labada gobol, si la mid ah shirarkii lagu saxiixay dhismaha Maamuladii ay dowladda Federaalka dhismaheeda kaalinta ku laheyd, sida kii Galmudug iyo Koofur Galbeed.
Dhinaca kale waxaa la isla dhex marayay halka ay noqoneyso Caasimadda Maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe iyo halka uu ka imaanayo Madaxweynaha, waxaana labadan qodob ay ahaayeen kuwo ugu xasaasisan ee aan wali lagu heshiin go’aan laga gaarin.
Dad badan ayaa dhegta u taagaya shirka maamul u sameynta Gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, waxaana wali la dhowrayaa magacaabida Guddiyadii u howl geli lahaa ka shaqeynta dhismaha maamulkan
Dowladda Somaliya oo ku dhawaaqday in dalka laga mamnuucday Gudniinka Fircooniga